ओमिक्रोन भेरियन्टसँग तर्सिने होइन सतर्क हुनु आवश्यक छ: डा शेरबहादुर पुन [भिडियो] :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
ओमिक्रोन भेरियन्टसँग तर्सिने होइन सतर्क हुनु आवश्यक छ: डा शेरबहादुर पुन [भिडियो]
कमला गुरुङ शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८, ०६:२१:००
काठमाडौं - कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टका विषयमा विश्वभर बहस भइरहेको छ। कतिपय वैज्ञानिकहरु दिनरात यसको अध्ययन अनुसन्धानमा जुटिरहेका छन्।
यसअघि भेटिएका डेल्टा भेरियन्ट भन्दा यसमा तीन गुणा बढी म्युटेसन भएको बताइएको छ। त्यसैले पनि यो बढी संक्रामक र छिटो फैलन सक्ने विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन्। यद्यपि यी सबै कुरा अध्ययनबाट पुष्टि हुन भने बाँकी छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा शेरबहादुर पुनसँग हामीले ओमिक्रोन भेरियन्टको बारेमा थप जान्ने प्रयास गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
अहिले देखिएको ओमिक्रोन भेरियन्ट के हो र यो कत्तिको संक्रामक छ?
– विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन भेरियन्टलाई ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ को नाम दिएको छ।
– यो भेरियन्टमा अत्यधिक म्युटेसन अर्थात् उत्परिवर्तन देखिएको छ।
– म्युटेसन धेरै भएकाले पनि यो धेरै संक्रामक र छिटो फैलन सक्ने अनुमान गरिएको हो। यद्यपि यो पुष्टि हुन बाँकी छ।
सामान्य भाषामा म्युटेसन भनेको के हो? धेरै पटक म्युटेसन हुँदैमा यो खराब हुन्छ?
– आफू बाँच्न र औषधिविरुद्ध लड्न भाइरसले आफ्नो आणुवांशिक तत्व (जीन) मा गर्ने परिवर्तन नै म्युटेसन हो।
– म्युटेसन हुँदैमा यसले जटिल अवस्था ल्याउने भन्ने हुँदैन। तर नियाल्न आवश्यक छ।
ओमिक्रोन भेरियन्टलाई रोक्न हाल बनेका खोप कतिको उपयोगी हुने अध्ययनले देखाएको छ?
– ओमिक्रोन भेरियन्टमा खोप कत्तिको प्रभावकारी छ÷छैन भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन।
– तर भाइरसको ‘स्पाइक प्रोटिन’मा म्युटेसन भएकाले प्रभावकारितामा केही कमी आउन सक्ला। तर पूर्ण रुपमा काम गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन।
– यसअघि डेल्टा भेरियन्टमा पनि खोपले काम नगर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर डेल्टालाई यसले काम गर्‍यो।
दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएका संक्रमितलाई नियाल्दा यो भेरियन्ट कत्तिको घातक देखिन्छ?
– दक्षिण अफ्रिकाको चिकित्सकहरुको भनाईलाई हेर्न हो भने यो सोचेको जस्तो कडा देखिएको छैन।
– एकदम माइल्ड लक्षणहरु देखिएका छन् भनिएको छ। सामान्य थकान हुने, शरीर दुख्ने, हल्का रुघाखोकी लाग्ने जस्ता लक्षणहरु देखिएका छन्।
– विगतमा म्युटेसन धेरै भएर दुख दिएको भएकाले पनि मानिसहरुको चासो बढी देखिएको हो।
त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा डराउनु भन्दा पनि सतर्क हुन आवश्यक हो?
– यो भेरियन्ट कत्तिको संक्रामक छ, कतिको घातक छ, खोपलाई काम गर्छ/गर्दैन भन्ने केही कुरा थाहा भइनसकेकाले डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन।
– डराउनुभन्दा पनि अहिले हामी सतर्क हुन आवश्यक छ।
– किनभने दक्षिण अफ्रिकामा हालसम्म त्यस्तो कडा खालको अवस्था निम्त्याएको देखिसकेको छैन।
सर्वसाधारणलाई यहाँको सुझाव के छ?
– कोरोना भाइरसको जोखिम घटिसकेको छैन। त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडा रुपमा पालना गर्नुपर्छ।
– ओमिक्रोन भेरियन्ट नेपालमा प्रवेश गरिसकेको पुष्टि भइसकेको छैन। तर पनि सावधानी अपनाउनु धेरै आवश्यक छ।
– सबै जनालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक छ।
– खोप लगाएर ६ महिना कटिसकेका र जोखिममा परेका समूहले बुस्टर डोज लगाउनु राम्रो हुन्छ।